Intel Arc inofuratira iyo Linux (yazvino) kusvika gore rinouya | Linux Vakapindwa muropa
Intel Arc inofuratira iyo Linux (ikozvino)
Isaac | | vatyairi, Graphics
Intel yaida kupinda mumusika weGPU, kurwisa AMD neNVIDIA. Iye zvino ivo vanozove sosi yechitatu yerudzi urwu rwemakadhi emifananidzo yakatsaurwa, nekuti Matrox anovatengesawo, asi nemachipisi akapihwa marezenisi neADD. Chiziviso chazvino che Intel Arc yakafumura iyo nyowani logo uye zita iro iro rekutanga mifananidzo inoenderana neiyo Xe yekuvakisa ichave nayo.
Wokutanga wavo yaizosvika muna 2022, ine chivakwa chine zvimwe zvakafanana neNVIDIA pane ne AMD (semuenzaniso: discrete ray yekutsvagisa mayuniti, kana AI kana XMX discrete block Super-sampling), kunyangwe hazvo chokwadi chekuti vamwe vevagadziri veiyi projekiti vaimbove AMD avo vakapihwa basa naIntel, saRaja Koduri. Uye zvakare, iyo yekuvakisa ichave isinganetsi,
Tichaona kuti magirafu aya anobuda sei maringe ne AMD neNVIDIA, asi zvese zvinoita sekuratidza kuti havazove vane simba uye pakutanga vanozoshaya kana zvichienzaniswa neizvo zvevamwe vakwikwidzi. Nekudaro, kana Intel ikazviwana nemazvo uye ivo vachitengesa makadhi avo nemutengo wakanaka, vanogona kukwikwidza neyezasi-yepakati-renji revapikisi vavo. Uchakwanisa here kugadzira maGPU kuTSMC panzvimbo yemafekitori ako (yakaderera purofiti margin)? Tichaona…
Kune rimwe divi, zvinoita sekunge Intel iri kubata madhiraivha eWindows 11, uye ichaenderera ichipa rumwe ruzivo paIntel Arc mumashure megore. Zvinoshamisira izvo rinoputika haina kumbotaurwa zvachose, ingori DirectX. Kunyangwe ichifungidzirwa kuti zvingaenderane, kusadaro kunenge kuri kukanganisa kukuru. Kune rimwe divi, zvinoita sekunge Intel yakachengetedza rutsigiro rweLinux zvishoma, zvirinani izvozvi. Nhau dzakaipa kune vashandisi vanoda kuzviedza pamichina yavo yeGNU / Linux.
Nekudaro, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti izvi zvaizogadziriswa gare gare, pamwe mugore rinotevera apo iyo mifananidzo yemakadhi inotanga kutengesa...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Intel Arc inofuratira iyo Linux (ikozvino)
LibreOffice 7.2 inosvika neHUD nyowani uye ichivandudza zvakanyanya kuenderana neMicrosoft Office